‘बुद्ध बन्न चाहन्छु’ भन्ने प्रचण्ड एकाएक किन गले ?::Best News Portal In Nepal, Business News, Political, Social, Science, Economy, Social, Entertainment, Nepali Model, Movies, Actors, Actor, Interview, Audio & Video.
‘बुद्ध बन्न चाहन्छु’ भन्ने प्रचण्ड एकाएक किन गले ?
काठमाडौं – पत्नी सीता दाहालको स्वास्थ्यका कारण तनाबमा परिरहेका सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ पछिल्लो समय अस्थिर बन्दै गएका छन् ।
प्रचण्डको जुन स्टारडम थियो, त्या घट्दै गएको छ । माओवादी पार्टीलाई एमालेमा मिसाएको एक वर्षभन्दा धेरै भइसकेको अवस्थामा प्रचण्डमा हतास मनस्थिति हुनु स्वभाविक पनि हो । प्रचण्डलाई नेकपाका अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पार्टी चलाउने जिम्मेवारी दिन्छु भनेका थिए ।
तर, प्रचण्डले पार्टी नेतृत्व लिने विषयमा अझै चुप छन् । प्रचण्डले आफूलाई गुटको भन्दा पनि सिङ्गो देशभरिका नेताहरूको रुपमा चिनाउन खोजेका छन् । ओलीले पनि प्रचण्डका हरेक गतिविधिलाई नजिकबाट नियालि रहेका छन् ।
नामको मात्रै अध्यक्ष पाएका प्रचण्डलाई ओली मात्र नभइ माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनालसहितका नेताहरू पनि अगाडि बढ्न दिने पक्षमा छैनन् । महासचिव विष्णु पौडेल पनि प्रचण्डलाई अध्यक्ष दिँदा आफू अध्यक्ष बन्ने बाटो बन्द हुने भन्दै प्रचण्डप्रति धेरै सकारात्मक छैनन् ।
राजश्वमारा विवादास्पद व्यापारीको घरमा ५०औँ वर्षगाँठ मनाएका प्रचण्डले भीभीआइपी र भीआइपीलाई मात्रै बोलाएका थिए । प्रचण्ड अर्बौं राजश्व छलीमा मुछिएका निरजगोविन्द श्रेष्ठको घरमा वर्षगाँठ मनाउन पुगेपछि उनको यो चर्तिकलाको विरोध भएको थियो ।